Zvinorevei kuti dot bhuruu pamberi pezita rezvishandiso zvinorevei muIOS | IPhone nhau
Zvinorevei kuti dot bhuruu pamberi pezita rezvishandiso zvinorevei muIOS
Apple inogara ichida maapplication edu pamwe neiyo inoshanda sisitimu yedu, ingave iri iPhone, iPad kana iPod touch, kuti ivandudzwe kune yazvino vhezheni. Kune izvi, yanga ichiunza akasiyana mabasa mumakore apfuura, saka kuti isu tirege chishandiso chive mutariri kuzviita.
Nekudaro, vazhinji ndivo vashandisi vanosarudza kugadzirisa mashandisirwo nemaoko, kungave nekuti nzvimbo yako yekushandisa ishoma kana nekuti ivo vanoda kuziva kwekutanga-ruoko ndedzipi nhau idzo dziwedzero dzinotipa isu, kunyangwe vamwe vanogadzira vasingasanganise iwo ruzivo uye vanozvimisikidza pachezvavo nhau dzapfuura.
iOS inoisa patinogona napo nhevedzano yeruzivo muchimiro chemifananidzo pamberi pezita rechishandiso kutizivisa nezve chimiro chayo. Kune rumwe rutivi tinowana iyo icon yegore ine museve wezasi, icon inoratidza kuti iko kushandiswa kwabviswa zvishoma kubva pane yedu kifaa, kutaura data, nekuti Hatina kuishandisa kwemazuva anodarika makumi matatu.
Iri basa rinogona kumiswa kuburikidza neesefa eOS, zvisinei, chiratidzo chekuti mamwe mafomu atakaisa pakombuta yedu, hatina kuvashandisa kwenguva yakareba, saka zviri nyore kuadzima kana tichida yedu yekutenderera kuti itiratidze mashandisiro atinonyatsoshandisa uye kusunungura zvisina basa nzvimbo inogara.
Imwe yemifananidzo inotiratidza iwo mamiriro ekushandisa ndeye bhuruu dot pamberi pemapurogiramu. Iyi poindi yebhuruu inoratidza kuti iko kunyorera kwakagadziridzwa kuita vhezheni nyowani, kungaita nemaoko kana otomatiki.
Kutenda kwaari, tinogona kuziva nguva dzese, ayo ari ekuvandudzwa kunyorera, kana isu tave nekumisa otomatiki inogadziridza basa. Iri dhi rebhuruu pamberi pezita rezvishandiso ibasa rinowanikwawo mu macOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Zvinorevei kuti dot bhuruu pamberi pezita rezvishandiso zvinorevei muIOS
Nzira yekusvitsa nekusingaperi foto muIOS 12